किन सांसद फेन बोकेर सदन गए ? प्रदेश नं १ संसद बैठक वातानुकूलित छैन ? - Koshi Online
किन सांसद फेन बोकेर सदन गए ? प्रदेश नं १ संसद बैठक वातानुकूलित छैन ?
जेठ २८, मोरङ, प्रदेश नं.१ सरकारले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्न आज बसेको सांसद बैठक लोडसेडिङकाकारण निर्धारित समयभन्दा आधाघण्टा ढिलो सुरु भयो । सुरु भएपछि हाउस भित्रका एसी चलेनन् । पंखाहरुसमेत कम भोल्टेजकाकारण यता–उता मात्रै हल्लिए । दुई–तीन पटक झ्याप्प–झ्याप्प बत्ति गइरह्यो । तर, सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल चल्यो ।
तर, धनकुटाका सांसद इन्द्रमणि पराजुलीले निक्कै चटक देखाए । उनले ब्याट्रीबाट चल्ने फेन घरबाट बोकेर ल्याएका थिए । विराटनगरको गर्मी थाम्न नसकेर उक्त फेन चलाउन थाले । दाँया–बाँया बसेका सांसदहरु आश्चर्यमा परे । उनले त्यो फेनको प्रयोग सकेपछि धनकुटाकै अर्का सांसद निरन राईलाई फेन जिम्मा लगाए ।
राईले पनि गाला, घाँटी र छातीमा सर्टको टाँक खोलेरसमेत हावा लिन भ्याए । राईले त्यसपछि झापाका सांसद गोपाल बुढाथोकीलाई दिए । उनले भरपुर हावाको आनन्द लिए । बुढाथोकीले इलामका सांसद काजीमान कागतेलाई दिए । उनलेसमेत मस्त मारेर पकेट फेनको हावा खाए । सरकारले वातानुकूलित प्रदेश सभाभवनको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाकारण यो समस्या आएको हो ।
लोडसेडिङका कारण सरकारको नेतृत्व गरेकै दल नेकपाका सांसदहरु फेन बोकेर सदन आएको बताएका थिए । तर, फेन बोकेर ल्याउने पराजुलीले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । व्यवस्थापनको कमजोरी संसद सचिवालयले स्वीकार गरेको छ ।
सचिवालयका अनुसार डबल फेजको लाइन जडान गरिदिन सचिवालयले विद्युत प्राधिरकणसँग माग गरेको छ । विराटनगरका सुभाष कामतले भने, ‘प्रदेश सभा बस्ने हलको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले के सरकार चलाउला ?’ उनले थपे लाज हुनुपर्ने हो नि सरकार आफ्नै छ आफैँ फेन लिएर संसद आउन ।’
यसै प्रसंगलाई जोड्दै स्थानीय मनिष कट्वालले भने, ‘सरकारे प्रदेश सांसदहरुको बैठक बस्ने वातानुकूलित हल बनाउन नसक्नु भनेको असफल सरकारको स्पस्ट उदहारण हो ।’
संघीय सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन् । ६ प्रदेशमै नेकपाकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु छन । तैपनी लोडसेडिङलाई समाप्त पार्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उज्यालो नेपालको अभियान चलाए । त्यो अभियानले उनलाई सफल बनायो । उर्जामन्त्री रहुन्जेल शर्मालाई चर्चाको शिखरमा पुग्यो ।
उनी त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भए । त्यसपछि उज्यालो नेपालको अभियानले काम नै गरिरह्यो । तर, झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेपछि लोड सेडिङ भएको हो ।